Ihe a na-akpọ ụlọ a bụ Hiroshima Peace Memorial ma ọ bụ Genbaku Dome
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Bislama Bulgarian Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Finnish French Georgian German Greek Hebrew Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kikaonde Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Lingala Lithuanian Macedonian Malagasy Myanmar Norwegian Pangasinan Polish Portuguese Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tahitian Thai Tigrinya Tsonga Turkish Twi Ukrainian Vietnamese Waray-Waray Xhosa Yoruba Zulu
N’OBODO a na-akpọ Hiroshima, nke dị na Japan, e nwere osimiri a na-akpọ Osimiri Motoyasu. E nwere otu ụlọ dị n’akụkụ osimiri a. Kemgbe afọ 1945 a tụrụ bọmbụ ebe ahụ, ọ tọgbọ nkịtị. Gịnị mere na a rụzibeghị ụlọ ahụ kemgbe ihe fọrọ obere ka ọ bụrụ iri afọ asaa?
Mgbe a rụrụ ụlọ ahụ bụ n’afọ 1915. E ji brik rụọ ya. Ọ bụ ụlọ elu nwere okpukpu abụọ. E ji ya mere ebe ndị mmadụ na-aga egosi ngwá ahịa ha mepụtara ọhụrụ. Ma, n’abalị isii n’ọnwa asatọ n’afọ 1945, mgbe o ji nkeji iri na ise gafee elekere asatọ nke ụtụtụ, njinji jiri. N’ụbọchị ahụ, ngwá agha ọgwụrụ mba a tụrụ n’obodo ahụ gbawara n’ebe na-adịghị anya n’ụlọ ahụ. Ọ bụ ya bụ nke mbụ e ji lụọ agha n’ụwa. Mmadụ niile nọ n’ụlọ ahụ nwụrụ ozugbo nje. Ma, okpokoro ụlọ ahụ adaghị.
Kemgbe ahụ, ndị obodo ahụ agbaala mbọ ka ụlọ ahụ dịkwa otú ahụ ọ dị kemgbe a tụrụ ya bọmbụ. Ngalaba Òtù Mba Ụwa a na-akpọ UNESCO kwuru na ụlọ ahụ na-echetara ndị mmadụ ụdị ike ngwá agha ụmụ mmadụ rụrụ kpara. N’afọ 1996, òtù UNESCO denyere aha ụlọ a n’ebe ha na-edenye aha ihe dị iche iche a na-agaghị echefu echefu n’ụwa. Ha kwuru na ụlọ ahụ na-echetara ha na ha kwesịrị ime ka udo dịrị n’ụwa.
Ma, ụdị ihe a emebeghị ka ndị mmadụ kwụsị ịlụ agha. Ihe na-akpatakwa agha ndị ahụ bụ anyaukwu, ịkpọ ndị agbụrụ ọzọ ma ọ bụ ndị okpukpe ọzọ asị ma ọ bụkwanụ mmadụ iburu ihe gbasara obodo ya n’isi. Ọ̀ pụtaziri na agha agaghị akwụsị akwụsị?
Baịbụl kwuru na ọ ga-akwụsị. Abụ Ọma 46:9 sịrị: “[Chineke] na-eme ka agha kwụsị ruo na nsọtụ ụwa. Ọ na-agbaji ụta, na-egbujisịkwa ube; ọ na-agbakwa ụgbọ agha ọkụ.” N’oge ahụ, Chineke ga-ewepụ ọchịchị ụmụ mmadụ were Alaeze ya dochie ha. Ọ bụ Jizọs Kraịst, bụ́ “Eze nke ndị eze,” ga na-achịzi ụmụ mmadụ.—Mkpughe 11:15; 19:16.
N’oge ahụ, a gaghịzi enwe ihe ndị ga na-echetara anyị agha ndị a lụrụ n’oge gara aga. Ihe ndị na-agbawa anyị obi ugbu a agaghịzi adị n’ihi na Aịzaya 65:17 kwuru, sị: “A gaghị echeta ihe mbụ niile, ha agaghị abatakwa n’obi.”
Chineke ekwela nkwa na ya ga-eme ka ihe niile na-akpatara ndị mmadụ ahụhụ kwụsị. Olee otú ọ ga-esi eme nke a, oleekwa mgbe ọ ga-eme ya?